पर्यटनमन्त्री आङछिरिङ कि कृपाशुर ? | abc.com.np
पर्यटनमन्त्री आङछिरिङ कि कृपाशुर ?
काठमाडौं । यति एयरलाईन्सका मालिक आङछिरिङ शेर्पाले गोकर्ण रिसोर्ट र त्यहाँ रहेको क्लव हत्याएर एकलौटी बनाउन चलखेर सुरु गरेका छन् । शाही शासन कालमा उक्त रिसोर्ट र क्लबको मुख्य सेयर नेपाली नागरिकले लिन नपाउने नियम थियो । जस अनुसार रिसोर्टको मुुख्य सेयर ५१ प्रतिशत सिङगापुरे नागरिक प्रेम सचदेवालाई दिइएको थियो । नव उदयमान पर्यटन माफियाका रुपमा स्थापित हुन थालेका शेर्पाले अहिले उक्त रिसोर्टको ५१ प्रतिशत सेयर हत्याउन अनेक षड्यन्त्र रचेर सचदेवालाई दु:ख दिन थालेका बुझिएको छ । स्रोत भन्छ–‘शेर्पाले होटलको सेयर हत्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई समेत दुरुपयोग गर्न थालेका छन् । आयोगका प्रमुख कार्कीसँग खासै सम्वन्ध नभएका शेर्पाले सोही क्लवका पुराना गल्फ प्रशिक्षक दीपक आचार्यलाई प्रयोगगरी एकाएक सम्वन्ध सुधारेका हुन् ।’
सिङगापुरे नागरिक सचदेवाले आचार्यलाई छोरा झै व्यवहार गर्ने भएकाले शेर्पाले आचार्यसँग विग्रिएको सम्वन्ध पनि सुधारेको स्रोत बताउँछ । गोकर्ण रिसोर्ट र गल्फको जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको छ । शेर्पाले आचार्यलाई पटकपटक निकाल्ने प्रयास पनि नगरेका होइनन् । आचार्यले प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई गल्फ खेल्ने सदस्यता दिलाएपछि उदयमान पर्यटन माफिया शेर्पा आचार्यप्रति नतमस्तक बनेका हुन् । अहिले लोकमान शेर्पाको स्वार्थ पुरा गर्न तल्लिन भएका छन् भने सोही विषयमा लोकमानसिंहले तत्कालिन नेपाल ट्रष्टका सचिव श्रीधर गौतमलाई कारवाही समेत गरेका थिए । उता उदयमान पर्यटन माफिया शेर्पाको कृपाले पर्यटनमन्त्री बनेका कृपाशुरलाई प्रयोग गरी मन्त्रालयमा समेत उनको हालीमुवाली बढेको छ ।
स्रोत भन्छ–‘मन्त्री कृपाशुरले आङछिरिङलाई नसोधी कुनै पनि काम गर्दैनन् । उनले नेपाल एयरलाईन्समा समेत आङछिरिङकै मान्छे सुगतरत्न कंशकारलाई मोटो रकम खर्चेर नियुक्ती दिएका हुन् । पर्यटनमन्त्री आङछिरिङ हुन कि कृपाशुर कर्मचारी नै दोधारमा पर्न थालेका छन् ।’
केहीदिन हप्ता पहिले उपचारका लागि थाइल्याण्ड गएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत आङछिरिङले सम्पूर्ण लगानीमा लगेका थिए । आङछिरिङको मेचमानीमा भ्रमणमा विदेश जानेमा एमाले निकट पत्रकार केशब खनाल पनि थिए । उक्त भ्रमणमा खनाल एक्लो पत्रकार परेका थिए । आधिखोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट हत्याउन केपीलाई फकाउन आङछिरिङ समेत थाइल्याण्ड गएको स्रोतले बतायो । अर्कोतिर, नेपाल एयरलाईन्सका अध्यक्ष शिबशरण न्यौपाने र कार्यकारी प्रमुखबीच समेत मनमपुटाब बढेको छ । निगममा कंसाकारले नियुक्ती पाएपछि एयरलाईन्स डुब्ने भयो भन्दै न्यौपाने हिड्न थालेपछि उनीहरुबीचको सम्वन्धमा चिसोपन आएको हो ।